Progressive Stampings - China QiDi Plastic akpụzi
Plastic Ọgwụ na ịkpụzi
Obere ezinụlọ ngwa oru akụkụ
Astronomy teliskop akụkụ
Hair drier akụkụ
ụlọ ọrụ akụkụ
Kpọkọtara ngwaahịa maka ahịa
Plastic Ọgwụ na ịkpụzi Onodi
CNC machining Onodi
Progressive stamping bụ a metalworking usoro na ike ruru punching , coining , ekwe na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ nke modifying metal akụrụngwa, jikọtara na akpaka nri usoro.
The nri usoro agabiga a warara nke metal (dị ka ọ unrolls si a eriri igwe) site niile nke ụgbọ nke a na-aga n'ihu stamping anwụ. Onye ọ bụla ebe anamde otu ma ọ bụ karịa arụmọrụ ruo mgbe a okokụre akụkụ e mere. The ikpeazụ ebe bụ a cutoff ọrụ, bụ nke kewara okokụre akụkụ si ebu web. The ebu web, tinyere metal na-chịngọm ná ntutu isi pụọ na aga na arụmọrụ, na-emeso dị ka scrap metal . Ma na-ebipụ pụọ, kụrụ aka ala (ma ọ bụ nke dies) mgbe ejected si anwụ set, na uka mmepụta na-agafere scrap bins via ala scrap ihe ebu eriri.
The nwayọọ stamping anwụ na-etinye n'ime a reciprocating zọ pịa . Dị ka pịa na-akpali elu, n'elu-anwụ na-akpali na ya, nke na-enye ohere ihe na-eri nri. Mgbe pịa na-akpali ala, ndị na-anwụ na-emechi na-eme ya bụ zọ ọrụ. Na onye ọ bụla ọrịa strok nke pịa, a dechara akụkụ a na-ewepụ si na-anwụ.
Ebe ọ bụ na ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-eme na onye ọ bụla "ebe" nke na-anwụ, ọ dị mkpa na warara ike merela agadi nke ukwuu kpomkwem mere na ọ aligns n'ime ole na ole thousandths nke anụ ọhịa dị ka ọ na-akwali si ojii na ojii. Mgbo ekara ma ọ bụ conical "ụgbọelu" tinye mbụ eduat gburugburu n'oghere warara ka obi sie a itinye n'ọnọdụ ebe ọ bụ na nri usoro emekarị apụghị inye ndị dị mkpa nkenke na oriri n'ogologo.
Progressive stamping nwekwara ike-emepụta na nyefe presses. Ndị a bụ ígwè obibi na nyefee mmiri si otu ebe na-esonụ na-were nke n'ibu "mkpịsị aka". N'ihi na uka mmepụta nke zọọ akụkụ nke na-chọrọ mgbagwoju anya na-pịa arụmọrụ, ọ bụ mgbe niile amamihe na-eji a na-aga n'ihu pịa. Otu n'ime uru ndị a na ụdị pịa bụ mmepụta okirikiri oge. Dabere n'elu akụkụ, nwetara nwere ike mfe na-agba ọsọ nke ọma karịrị 800 akụkụ / nkeji. Otu nke ọghọm nke ụdị pịa bụ na ọ bụ adabara elu kpọmkwem miri ịbịaru nke bụ mgbe omimi nke stamping karịa ndị dayameta nke akụkụ. Mgbe ọ dị mkpa, nke a na-rụrụ n'elu a nyefe pịa, nke na-agba ọsọ na iji nwayọọ gbapụrụ ọsọ, na-adabere na n'ibu mkpịsị aka jide akụrụngwa na ebe n'oge dum akpụ okirikiri. N'ihe banyere nke na-aga n'ihu pịa, nanị akụkụ nke na-akpụ okirikiri nwere ike na-edu spring kwajuru aka uwe ma ọ bụ yiri nke ahụ, bụ nke na- concentricity na ovality mbipụta na-abụghị edo ihe ọkpụrụkpụ. Ọzọ ọghọm nke-aga n'ihu presses tụnyere nyefee presses bụ: mụbaa, akụrụngwa input chọrọ nyefee akụkụ, ngwá ọrụ na-ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ n'ihi na ha na-mere na nkanka na nnọọ nta nọọrọ onwe ha ụkpụrụ kwa ebe; na-apụghị ime ịrụ Filiks ke pịa na-achọ akụkụ-ahapụ warara (atụ beading, necking, Flange curling, na eri Rolling , rotary stamping wdg).
The dies na-emekarị ka nke ngwá ọrụ ígwè iji nagide elu ujo loading aka, anọgide na-adị mkpa nkọ mbepụ, na iguzogide abrasive agha aka.
Eri na-ekpebisi ike site na nọmba nke atụmatụ, nke ikpebi ihe tooling ga-mkpa na-eji. Ọ na-gwara na-atụmatụ dị mfe dị ka o kwere omume na-eri nke tooling ka a kacha nta. Atụmatụ na-na-nso ọnụ na-emepụta a nsogbu n'ihi na o nwere ike ọ na-enye zuru ezu nwechapụ maka ntụmadị, nke nwere ike ịkpata ọzọ ojii. Ọ nwekwara ike ịbụ mfịna nwere warara he na protrusions.
Ihe nlereanya magburu onwe nke ngwaahịa nke a na-aga n'ihu na-anwụ bụ mkpuchi nke a onunu ike . The esiri tab bụ na e mere onye na-aga n'ihu stamping usoro na mkpuchi & nzukọ bụ na e mere ibe ya, na-esiri tab n'out oge na-eri nri a nri n'akuku n'ime mkpuchi & nzukọ usoro.
Post oge: Jul-10-2017
Okwu: No.12 HuangJiaXiang Road, LanJiang Street, YuYao City
Gịnị Bụ Plastic Ọgwụ na ịkpụzi
Gịnị Bụ The CNC machining Brass Parts